Mootummaa Uummatni filate hundeessuuf, qabsoo hiree ofii ofiin murteeffachuu jabeessuu – Kichuu
HomeAfaan OromooTVMootummaa Uummatni filate hundeessuuf, qabsoo hiree ofii ofiin murteeffachuu jabeessuu
Mootummaa Uummatni filate hundeessuuf, qabsoo hiree ofii ofiin murteeffachuu jabeessuu qabna jedhan Qeerroowwan Oromiyaarraa
Mootummaa Uummatni filate hundeessuuf, qabsoo hiree ofii ofiin murteeffachuu jabeessuu qabna jedhan Qeerroowwan Oromiyaarraa OMN dubbise.
Oromiyaan Mootummaa filatte waan hin qabneef, qaamni qabsaa’ota Oromoo ukkaamsee mootummaa ta’uu of moggaasu mootummaa osoo hin taane garboomfataadha kan jedhan qeerroon Oromiyaa godinaalee garaagaraa, mootummas dhugumatti Oromiyaaf ta’u hundeessuuf qabsootti jabaachuu qabnas jedhaniiru.
Bilxiginnaan ji’oota muraasa dura filannoo waliin dha’uun qabsaa’ota kaan mana hidhaatti galchuun, kaan ammoo doorsisuun Afaan yoo qabachiistu gariin ammoo maallaqaan maksuun filannoo sobaa geggeeffamuunsaa ni yaadatama.
Filannoon sobaa kun wal ta’iinsa boordii filannoo fi murna Bilxiginnaatiin bakka moorkattoonni hin jirretti kan adeemsifame yoo ta’u, mootummoota gamtooman dabalatee dhaabbilee Diimokiraatawoo garaagaraatiin filannoo balaaleffatamaa ture ta’uunsaa yaadannoo yeroo dhihooti.
(Omnglobal)–Murni Bilxiginnaa vaayiresii Koronaa sababeeffachuun filannoo bara 2012 karaarraa kan maksee yoo ta’u, xumura bara 2013 irratti miseensota Paartilee Moorkattoota danuu mana hidhaatti erga naqee booda, qofaa ofii dorgommiitti seenee ture.
Dorgommii ofiin of dorgome kanaan injifachuusaa kan labsate Bilxiginnaan guyyaa har’aa ammoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuu maqaa jedhuun Yaa’iin Caffee Adaamaatti geggeeffamee jira.
Dhimma kana ilaalchisuun OMN Oromiyaa keessaa qeerroowwan garaagaraa dubbisee jira. Qeerroowwan OMN dubbise kunniin akka jedhanitti, mootummaan amma hundeeffame jedhamuun miidiyaalee mootummaatiin hafarfama jiru kun kan uummatni filate osoo hin taane kan Bilxiginnaan filatedha.
Godina Harargee Lixaa magaalaa Awwadaay irraa qeerroon OMN-iif yaada kenne tokko akka jedhutti “Caffee Oromiyaa wanti jedhamu kan diigame yeroo ODP dhabamsiifamtee, Bilxiginnaan hundeeffamtedha. Inumaawuu ammatti Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa filuu kan danda’u Caffee osoo hin taane Ministeera Muummee yookaan paartii Bilxiginnaati” jedha.
Haaluma wal fakkaatuun jiraata magaalaa Naqamtee OMN dubbise akka jedhutti “Dambiin ittiin bulmaata Bilxiginnaa akka jedhutti, Mootummaa naannolees ta’e kantiibaa magaalotaa muuduu kan danda’u dura ta’a Bilxiginnaadha. Kanaaf Caffeen yaa’i geggeeffateefi miseensota haaraa simate ololli jedhu kun diraamaa gowwomsaa Adaamaattii raawwatamaa jirudha malee Caffeen aboo murteessuufi shaaruu irraa fudhatamuunsaa waggaa lama ta’uuf adeema” jechuun dubbata.
Qeerroon magaaa Shaashamannee OMN dubbise kan biraanis bakka qabsaa’onni Oromoo fi namoonni Oromoon itti amanu hedduun hidhamanii jiranitti, mootummaan haaraa hundeeffamu hin jiru erga jedhee booda “sumsuma jijjiiruun itti hin miyeessu” jechuun mammaaka.
Godina Shawa Bahaa magaalaa Bishooftuurraa kan dubbisne Qeerroon kan biraas “diraamaan fakkeessa akka kanaa Oromiyaa irratti hojjetamu kan eegale bubbuleera. Uummatni keenyas kana ni beeka” jechuun, furmaatarratti xiyyeeffannee Mootummaa dhugumatti uummataaf hojjetu kan sirni garboomfataa akkuma akaakayyuuwwansaa darbaniitti nuuf filu osoo hin taane, kan ofiin filannee ittiin bullu dhaabbachuuf qabsoo keenya haa jabeessinu” jedhee jira.
Walumaa galatti qeeeroowwan kunniin, mootumma haaraa maqaa jedhuun kan alagaan ofiin nutti ergu gurra dhowwannee, mirga ofiin of bulchuu keenya dhugoomsuun Mootummaa ofiin filanne haa ijaarrannu dhaamsa jedhu uummata Oromoof dhaamaniiru.
"Nuti mootummaa kuffisuuf biyya hingalle, mootummaa gargaaruuf galle"
"Nuti mootummaa kuffisuuf biyya hingalle, mootummaa gargaaruuf galle" Obbo Galaasaa Dilboo jedhe. Deggaraa OPDO moo…
WBOn Mootummaa Yaaddoo Keessa Galche. Siyaasaa Amaaraa: Eenyutti Abiy Angoorraa Kaasuu Barbaadaa? OMN Horn: Odeessaalee…
Kun qabsoo uumaataa biyyaa keessa jirutii